Tag: Google AdWords maka SEO | Martech Zone
Tag: Google AdWords maka SEO
M ka na-echeta mgbe a na-eche mbadamba ihe dị ka ntakịrị na mpụga iwu. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ngwa na-agbanwe ihu njirimara ndị ọrụ ha ma adaba na mbadamba nkume nke omume na-agbanwe. Naanị taa m hapụrụ laptọọpụ m n'ụlọ mgbe m gara Barnes na Noble. M wetara iPad m n'ebe ahụ wee gafere obere ọrụ. Ọ bụ ezie na m nwere Thunderbolt na nnukwu ihuenyo, my